abcnepali | » बजेट भाषण: प्रदेश र स्थानीय तहले कति कति पाउने भए अनुदान ? बजेट भाषण: प्रदेश र स्थानीय तहले कति कति पाउने भए अनुदान ? – abcnepali
बजेट भाषण: प्रदेश र स्थानीय तहले कति कति पाउने भए अनुदान ?
फिक्कल : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पेश गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान अन्तर्गत् प्रदेशमा क्रमशः ५५ अर्ब रुपैयाँ र ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तह तर्फ सरकारले यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदान तर्फ १ खबए २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव र सूत्र अनुसार यस्तो अनुदान तय गरिएको बताएका छन् ।